रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्रालय टुंगियो, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? « Ok Janata Newsportal
रामकुमारी झाँक्रीको मन्त्रालय टुंगियो, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी मुलुकको चौथो ठूलो दल बनेसँगै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताइसकेका छन् ।
यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट को–को मन्त्री बन्छन् भन्ने चासोको विषय छ । एमालेबाट अलग्गिएर बनेको पार्टीका कुन–कुन नेता मन्त्री बन्छन् भन्ने विषय सर्वत्र चासो भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री भने मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ ।
पार्टीमा निडर र स्पष्ट वक्ताको छबि बनाएकी झाँक्रीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि मन्त्री बन्नका लागि ढाडस मिलेको बताइएको छ । पछिल्लो समय सरकारको निर्णायक बनेको माओवादी केन्द्रले पनि एकीकृत समाजवादीबाट को–को मन्त्री बन्छन् भन्ने विषयलाई चासोको रुपमा हेरेको छ ।
झाँक्रीलगायत मन्त्री बन्नेमा सोमप्रसाद पाण्डे, शेरबहादुर कुवँर, किसान श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहेको छ । उनीहरुलाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे भने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । लामो समय बितिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।
आफ्नै पार्टीभित्रको विवादमा रुमलिएका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई कसरी हाँक्लान् ? भन्ने प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ ।